Af-Bantu - Wikipedia
Af-bantuu (Af Ingiriis : Bantu languages, Af carabi: البانتو) waa farac ka mida afafka loo yaqaan Mayjar-koongo, qiyaasta la sameeyay ayaa ah in 522 farac uu leeyahay afka baantuuga iyagoo waliba si hoose u sii kala qaybsama, afka baantuuga waxaa looga hadlaa si balaaran bariga iyo koofurta kaamiruun, waxaa kaloo aad looga hadlaa afrika dhexe, afrikad koonfureed iyo bariga afrika,
Tirada ugu badan dadka ku hadla afkaan waa sawaaxiliga looga hadlo geeska afrika, dhexda afrika iyo afrikada koonfureed. afka shoona ayaa ku xiga waxaana ku hadla 10.8 milyan, waxaa ku soo xiga afka Zulu 10.3 milyan ayaa ku hadasha.
Afka baantuuga ayaa asal ahaan ka soo jeeda nayjeeriya iyo kaamiruun ka dib wuxuu u faafay bari iyo koonfur. ereyga baantuu ayaa macnihiisu yahay Dad ama bulsho. inkastoo ay luuqad ahaan kala fogtahay hadan ereyada kulmiya ayaa aad u badan waxaa ka mida Mtu ama Mntu oo loola jeedo Qof.
1 Afafka ugu caansan Baantuuga
2 Eeriyada afka oo juqraafi ah
3 Ereyo Baantuu ah oo galbeedka laga adeegsado
4 Qaab qoraalka
Afafka ugu caansan BaantuugaEdit
Liiskaan soo socda waxaa ku qoran afafka ugu waaweyn afka baanntuuga io xaga badnaanta dadka.
Liiskaan ma dhamaystirna, isku day lagu sameeyay in la kulmiyo luuqadaha baantuuga waxaa laga helay gudaha The Bantu Languages of Africa, 1959 .
Eeriyada afka oo juqraafi ahEdit
Ereyo Baantuu ah oo galbeedka laga adeegsadoEdit
Qaar ka mida ereyada baantuuga ayaa amaah ahaaan looga adeegsada wadama reer galbeedka waxaana ka mida :
Sida badan waxaa loo qoraa afafka baantuuga qaabka laatiinka iyo qaabka carabiga, qaar kaloo waxaa jira adeegsada qaabab u gaar asii aan badanayn.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Bantu&oldid=159415"
Last edited on 10 Agoosto 2016, at 08:04
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Agoosto 2016, marka ee eheed 08:04.